Maxay yihiin Siddeeda arrimood oo uu Trump ku sheegay Soomaalida? +(Warbixin) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxay yihiin Siddeeda arrimood oo uu Trump ku sheegay Soomaalida? +(Warbixin)
Maxay yihiin Siddeeda arrimood oo uu Trump ku sheegay Soomaalida? +(Warbixin)
Washington (Halqaran.com) – Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa markale soo celiyay weerarrada dhanka afka ah ee uu ku qaadayo Soomaaliya iyo Ilhaan Cumar.
Soomaalida badan ayaa deggan Minneapolis